Archive du 20171016
Fahafatesan'ny Pr Zafy Tsy hita Rajaonarimampianina
Tonga nitsena sy nanome voninahitra ny nofo mangatsiakan’ny filoham-pirenena teo aloha, ny profesora Zafy Albert teny Ivato ny praiminisitra, lehiben’ny governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ireo mpikambana ao amin’ny governemanta.
Tantsahan’i Vakinankaratra Tezitra mafy amin’ny fitondrana
Mampiaka-peo ny tantsahan’i Vakinankaratra izay malaza amin’ny famokarana sy fiompiana raha ny eto Madagasikara. Ny fiompiana anefa no manana olana amin’izao fotoana ka mampiaka-peo ireo mpiompy sy mivelona amin’izany.
Fifidianana 2018 Kotrehina hahemotra
Mandeha ny fihantsiana ady sy ny fanakorontanana ataon’ny fanjakana HVM. Izy ireo tokony handamina indray no manangan’ady sy maniry ny hisian’ny korontana eto Madagasikara. Hitady izay fomba rehetra hisian’ny savorovoro, ka tsy hampisy ny fifidianana 2018 ny tanjona.
Andry Rajoelina Tratry ny sivana tao amin’ny TVM
Samy nahatsikaritra ny rehetra nijery ny televiziona nasionaly na ny TVM omaly tolakandro fa nisy fotoana hafahafa be ny sary nandritra ny famangiana sy fampaherezana ny fianakavian’ny Pr Zafy Albert teny amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina.
Miarahaba anao hatrany ry Jean amin’ny fahasahianao tsy mametra-pialana ihany amin’izao famaizan'Andriamanitra amin’ny alalan’ny fipariahan’ny valan’aretina eto amin’ny firenena izao !
Fangalarana herinaratra Tratra ambodiomby ireo mpiasan’ny Jirama
Tranga hafa mihitsy ity niseho tao Toamasina ny zoma hariva ity, satria mpivady samy mpiasan’ny jirama ao Toamasina no tratran’ny orinasa Jirama mangalatra herinaratra, ka mamarotra amin’ireo fianakaviana maromaro manodidina azy ireo tao Ambalamanasy “Carreau II”.
Ny Hery tsy mahaleo ny Fanahy
Tafapetraka soa aman-tsara ny rafitra hiantsoroka ny fampihavanam-pirenena. Tsy arakarak’izany kosa ny tsio-drivotra politika, fa vao mainka mizotra any amin’ny fihantsiana ady sy korontana.
Voka-dratsin’ny pesta Nihemotra ny 30%-n’ny mpizahatany ao Toamasina
Nandritra ny fandalavon’ny minisitry ny fizahantany Ratsiraka Roland tao Toamasina ny zoma teo niaraka tamin’ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka, nitondra ireo manampahaizan’ny OMS momba ny valanaretina pesta, lanonana natao tao amin’ny efitrano malalaky ny faritra atsinanana, no nahalalana fa efa mahatratra 20% hatramin’ny 30% ny famandrihana hitsidihana an’i Toamasina nataon’ireo mpizahatany no efa nanafoana ny fitsidihany.
Fatiantoky ny Tiko AAA Mitentina 800 tapitrisa ariary
Mbola mitana ny sain’ny maro ankehitriny ny nanakatonan’ny fanjakana ny orinasa Tiko AAA any Andranomanelatra Antsirabe. Nambara ho tsy nahazo alalana ara-tontolo iainana ny orinasa, ka nakaton’ny fanjakana tamin’ny anaran’ny minisiteran’ny tontolo iainana tamin’ny alalan’ny minisitra Ndahimananjara Johanita sy ny minisiteran’ny Indostria tarihin’i Tazafy Armand.
Taom-piotazana jirofo Hisokatra anio ny an’ny faritra Atsinanana
Nivoaka ny zoma 13 oktobra teo ny didim-pitondram-paritra laharana 014/2017/Res-Ats, mikasika ny taom-piotazana jirofo ho an’ny faritra Atsinanana amin’ny taona 2017 – 2018.